BASIL GUDUUD IYO CASAAN: SHARRAX LEH SAWIR, ISTICMAAL, SIYAABO FAA'IIDO LEH, IYO BEERAHA, IYO SIDOO KALE SIDA LOO ISTICMAALO KARINTA CUNTADA? - BEER CAGAARAN
Cawska dhaq ama basil dhogorta leh: sifooyin gaar ah, dib u eegis noocyo kala duwan sawirro, beerashada iyo isticmaalka
Basilka casriga ah ee wakhtiyadii hore waxaa loo yaqaan 'cowska' boqoradda. Tani ma aha shil, sababtoo ah this warshad faa'iido leh waxaa loo isticmaalaa bogsiiyo dad si ay u daweeyaan cudurada kala duwan.
Qodobada faa'iidada leh ee basilku waxay u sabab u yihiin fiitamiin iyo macdanta macdanta gaarka ah. Iyo thanks to aromas basbaas iyo dhadhan, dhirta this waxaa loo adeegsaday karinta.
Dheeraad ah ayaanu dhammaanba ka sheegi doonnaa basil, ka badan waa waxtar leh oo waxyeello u leh noolaha. Waxaan sidoo kale sheegi doonaa sida ay u koreyso iyo sida loo isticmaalo si haboon, sababta marmarka qaarkood caleemaha dhirta noqdaan kuwo cagaar ah.
Maxay tahay iyo sidee ayay uga duwan tahay cagaarka?
Basil waa qaraabo naas. Iyadoo ku xiran midabka caleemaha, waxaa jira noocyo guduud ah iyo cagaar. Si kastaba ha ahaatee, farqigooda ma aha midabka midabka kaliya - dhirta ayaa leh dhadhanka dhadhanka kala duwan iyo dhadhanka.
Cunto kala duwan - macaan, jilicsan, jeexan. In dhadhan ay jiraan waxaa ku qoran maqaarka iyo toon ah. Kala duwanaanta ugu caansan waa basil ama Basil Liguria. Waxyaabahan waxa loo isticmaalaa cuntooyin badan oo Mediterranean ah.
Balsil Purple wuxuu leeyahay dhadhan qaali ah oo dhadhan leh oo leh dareen qallafsan. Waxaa loo isticmaalaa in lagu kariyo dalalka Aasiya iyo Cafiska. Cufan jirridda waxaa loo isticmaalaa khudradda cagaaran, caleemaha iyo caleemaha waxaa loo isticmaalaa sida lafdhabarta noocyo kulul, qabow iyo cabitaano kala duwan.
Hababka beerista iyo waxyaallaha gaarka ah ee daryeelka basil ee noocyo kala duwan iyo midabo kala duwan ayaa ku dhow.
Iyada oo ay ka kooban tahay kiimikada iyo faa'iidooyinka jidhka bini'aadamka, baradhada cagaaran iyo guduudka way kala duwan yihiin. Sidaa darteed, noocyo guduud ah ayaa inta badan loo isticmaalo ujeedooyinka daawooyinka. Labada noocba waxay leeyihiin saameyn togan:
maqaarka iyo timaha;
Noocyo iyo noocyo: sharaxaad leh sawir
Hoos waxaa ku qoran sawirro iyo sharaxaada noocyada kala duwan ee basil, oo ay ku jiraan casaan. Waxaa ka mid ah noocyada basilada guduudan yihiin kuwan soo socda:
Kala duwanaanta soo kordhaysa. Dhirta qaangaarka ah marar dhif ah ayey kor u kacdaa 50 sentimitir. Waxaa lagu koray sariiraha ama gudaha gudaha dheryaha. Caleemuhu waxay leeyihiin caraf udgoon leh oo leh dareen ah toon. Waxaa loo isticmaalaa nooc kasta oo ka mid ah marinades kala duwan, saladh salad iyo suxuunta kulul.
Dalabyada kala duwan ee loo baahan yahay. Isla xilligaas, waxsoosaarro badan ayaa laga goostay dhirtaas. Caleemaha waxay dhadhanka ku dhajiyaan iyagoo leh talooyin allspice ah. Waxay u fiican tahay maraqa, saladhka, hilibka iyo suugada.
Noocyo kala duwan oo ay soo saareen ilbidhiqsiyihii nus qarni kahor. Waxay leedahay caraf udgoon oo macaan. Ku haboon tahay inuu ku koro guriga guriga daaqadaha iyo berrinka bannaan. Waxaa loo isticmaalaa sidii loo kabo dharka iyo marinades.
Noocyo kala duwan oo ku faafaya cuntooyinka Hindiya. Waxay leedahay dhadhan tartiib tartiib ah. Hindiya, oo loo isticmaalo cibaadooyin muqadas ah.
Kala duwanaanta koonfurta, waxay leedahay dhadhan yar, waxaa loo isticmaalaa sida hilib, hilib, kalluun iyo cabitaan. Nooc nooca Basil jecel yahay diirimaadka, Sidaa darteed waxay si fiican ugu koraan guriga.
Qodobbada waxtarka leh iyo halabuurka
Hadda oo ku saabsan faa'iidooyinka jidhka, waxyeelo iyo contraindications noocyo kala duwan ee basil, oo ay ku jiraan casaan. Urka caansan ee dhirta ee dhirta ayaa sabab u ah joogitaanka saliid muhiim ah oo ah walxaha adag ee caleenta iyo caleemaha. Fiirinta saliidda noocyada kala duwan waxay ka socotaa 0.3 ilaa 1.5 boqolkiiba. Waxyaabaha kiimikada ku jira waxay ka kooban yihiin waxyaabaha soo socda:
Fiitamiinada soo socda ayaa ku jira caleemaha basil:
Maaddaama ay ka kooban tahay kiimikada kiimikada ee taajirsan, basil waa wax ka soo horjeeda anti-bararka, bakteeriyada iyo daaweynta tufaaxa. Khamriga faa'iido leh ee hypotonics, oo leh burbur, sida kor u kiciya cadaadiska dhiigga.
Isticmaalka basilku wuxuu ku xadidan yahay dhowr khatarood:
Xinjiro dhiig oo hooseeya.
Xaaladda sii-deynta kadib.
Dhiigxinta xididdada dhiigga.
Baaritaan kasta oo ka mid ah nidaamka wadnaha iyo xididdada.
Uurka, maadaama basilku uu keeni karo cadaadis dheeraad ah iyo taakulada.
Xitaa haddii maqnaanshaha ka-hortaggaas, basil waa in lagu qaataa qiyaaso macquul ah. Haddii ay dhacdo isticmaalka xad-dhaafka ah, suuxdinta jidhka waa suurtagal.
Markaad karineysid: halkee ku dar caleemo cusub?
Basilada cagaaran ayaa loo adeegsadaa karinta. Waxaa macquul ah in la isticmaalo caleemo cusub, kuwaas oo la jarjarey ama la jeexay by gacanta iyo ku daray cuntada. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa maraqa la qalajiyey ama la qaboojiyey. Maxay basil cunaan? Bariisadu waxay ku haboon tahay karinta:
Lamb, hilibka lo'da.
Bariisku wuxuu si fiican ugu habboon yahay yaanyada, kareemka iyo kareemka labeen. Isku-dhafka guuleysta - khudaarta basil iyo cagaaran ee salad. Shaaha ayaa la dhajiyay iyadoo lagu daro caleemaha basil waxay leedahay ari aan caadi aheyn iyo hoyga jilicsan.
Basil waxaa loo isticmaalaa kareemka jirka loogu talagalay diyaarinta maskaxyada iyo alaabta daryeelka timaha, maqaarka, ciddiyaha. Xeryaha ka kooban dhirta ayaa leh faa'iidooyinka soo socda:
U aammusi bararka maqaarka.
Hagaajinta microcirculation ee unugyada epidermis iyo maqaarka.
Iska ilaali da'da hore.
Ku hay guryaha lidka ku ah bakteeriyada.
Ka saar casaanka iyo da'da.
Isticmaal joogto ah, hagaajinta xaaladda guud ee maqaarka, timaha iyo ciddiyaha.
In maskooyinka iyo alaabta daryeelka, geedka laftiisa ayaa loo isticmaalaa, iyo sidoo kale saliidaha lagama maarmaanka ah ee basil.
Beerto iyo koritaanka
Seeds in dhulka u furan
Waa suurtogal in la abuuro bacriminta basil ee dhul furan kaliya badhtamaha May, marka aanay jirin wax khatar ah oo dhaxan habeenkii. Geedku wuxuu jecel yahay iftiinka qorraxda, bacriminta iyo carrada lagu bacrimiyo.
Diyaarinta waxaa lagu talinayaa in lagu doorto cimilada ama daruuriga ah. Waa muhiim inaad xaqiijiso waraabinta dharka iyo dharka. Iyada oo habka this cows sii kordhaya si tartiib ah, iyo beergooysinku waa inay sugaan waqti dheer.
Sida loo koro geedo?
Abuurtaan abuurka geedo bilaabaan Abriil.
Marka hore, carrada nafaqo ayaa la diyaariyaa, taas oo laga iibsan karo dukaamada. Waa muhiim in dhulka uu iftiimiyo oo dabacsan, ha ahaado hawada iyo qoyaanka.
Seeds ma qodo qoto dheer - kaliya wax yar ku rusheeyeen dhulka. Jeexitaanku ma qaadan doono waqti dheer.
Sida ugu dhakhsaha badan caleemaha kowaad waxay u muuqdaan, inaad hoos u ridi karto.
Marka cimiladu diiranto, geedo waxaa lagu beeray beerta.
Habkani wuxuu si ka dhakhso badan u soo saari doonaa marka laga koro abuurka.
Daryeelka geedo fudud. Waa ku filan in la ilaaliyo nooca waraabka iyo marmar dabacsan dhulka. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad quudiso Bacriminta basilaha bil kasta. Marka barbaariyeyaashu ay soo muuqdaan, waxay si fiican u saameeyaan, kharashka ka mid ah waxa baadiyaha koraan ballaaran.
Cudurada iyo dhibaatooyinka
Basil waxay u adkaysantaa sheyga loo yaqaan "pathogenic microorganisms", laakiin mararka qaarkood waxay saameyn kartaa cudurada noocaas ah:
Iska jooji aphids.
Maxay cagaar u noqotaa?
Dad badan ayaa xiiseynaya jawaabta su'aasha ah sababta basil-googo jilicsan mararka qaarkood noqdaan cagaar. Haddii si lama filaan ah basil uu u bilaabo inuu helo cagaarka cagaaran, ama caleemo cagaaran oo cusub, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato shuruudaha xabsiga. Inta badan, warshadu ma hayso qorraxda ku filan. Xaaladdan, waxaad u baahan tahay inaad ku bedesho aag aad u iftiimiso.
Waxaad kaydin kartaa basil si uusan u luminin dhadhanka iyo bogsashada guryaha siyaabaha soo socda:
Qaboojiyaha - wakhti gaaban (ilaa 2 toddobaad).
Ku qalajinta xaaladaha dabiiciga ah: si aad ugu qallajiso meel qallalan, diiran, iyada oo aan qorraxdu si toos ah lahayn.
Basil waa dhirta basbaaska leh oo kor u qaadi karta dhadhanka suxuunta iyo cabitaanka kala duwan. Horumarinta iyo daryeellidda cawska ayaanan keeni doonin dhib badan, iyo isticmaalka cuntadu waxay jidhka siin doontaa tiro badan oo ah maaddooyin wax ku ool ah.